Amathuluzi edayimani ekhanda nge-Induction nge-RF yokukhishwa kwesibhakabhaka ephathekayo
Ikhaya / Izicelo / Induction Brazing / Amathuluzi Wedayimane Wedayimane Ngokungeniswa
Isigaba: Induction Brazing Tags: idayimane elikhazimulayo, amathuluzi edayimane, brazing amathuluzi wedayimane, amathuluzi edayimane ebhula, imvamisa ephakeme yedayimane, ukungeniswa brazing idayimane
Ama-Diamond Tools Amathuluzi Okushisa Ukushisa Izinto Zokugqoka
Induction Brazing kuyindlela ethembeke kakhulu yokujoyina idayimane ezinsimbini. Futhi iyindawo esetshenziswa kakhulu futhi ingenye yezindawo lapho izinqubo zigcinwa khona njengezimfihlo zokuhweba ezinkampanini eziningi. Leli phepha lizama ukuhlinzeka ngesibukezo samadayimane abhedayo, kanye nesibukezo semishini esanda kwakhiwa esetshenziselwa ukubopha izingxenye.
I-Induction Brazing iyindlela yokuhlanganisa izingcezu ezimbili ndawonye kusetshenziswa insimbi yesithathu, encibilikisiwe yokugcwalisa insimbi. Indawo ehlangene ishisa ngaphezu kwendawo yokuncibilika kwe-braze alloy kodwa ngaphansi kwephuzu lokuncibilika kwezinto ezihlanganisiwe; ingxubevange ye-braze encibilikisiwe ingena esikhaleni esiphakathi kwezinye izinto ezimbili ngesenzo se-capillary futhi yakhe isibopho esiqinile njengoba iphola. Imvamisa lapho ujoyina izinsimbi, kudalwa isibopho sokusabalalisa phakathi kwezinsimbi ezimbili ezizohlanganiswa ne-braze alloy.
Kuzo zonke izindlela ezitholakalayo zensimbi yokujoyina,Ukukhishwa kwesibalo kungaba okuguquguqukayo kakhulu. Amalunga weBrazed anamandla amakhulu okuqina - avame ukuba namandla kunezinsimbi ezimbili eziboshwe ndawonye. Amalungu angenalutho e-Induction ibuye igxothe igesi noketshezi, imelane nokudlidliza nokwethuka futhi ayithintwa yizinguquko ezejwayelekile ekushiseni. Ngenxa yokuthi izinsimbi ezizohlanganiswa azincibiliki ngokwazo, azisontekile noma zihlanekezelwe ngenye indlela futhi zigcine izici zazo zokuqala zensimbi.
Le nqubo ikulungele kahle ukujoyina izinsimbi ezingafani, okunikeza umklami womhlangano izinketho eziningi zezinto ezibonakalayo. Imihlangano eyinkimbinkimbi ingenziwa ngezigaba ngokusebenzisa izinsimbi zokugcwalisa ezinamaphuzu ancibilika kancane kancane. Ngokwengeziwe, kungakhethwa i-braze alloy ukukhokhela ukwehluka kokulingana kokuqina kokushisa phakathi kwezinto ezimbili. I-Brazing iyashesha futhi iyonga, idinga amazinga okushisa aphansi kakhulu futhi iyakwazi ukuzivumelanisa nezindlela zokuzenzekelayo nezinciphile zokukhiqiza.
Induction Brazing yedayimane nezinsimbi zensimbi zehluke kakhulu ekubhangiseni ukujoyina izinsimbi. Esikhundleni sokuthembela esenzakalweni se-capillary kanye ne-bond diffusion, ukuboshwa kwedayimane kuncike ekuphenduleni kwamakhemikhali.